DHEGEYSO-Xildhibaan Cabdifataax Xuseen oo kahadlay xaaladda Galkacyo. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Xildhibaan Cabdifataax Xuseen oo kahadlay xaaladda Galkacyo.
Oktoobar 1, 2016 11:42 b 0
Galkacyo, Oct 01 2016–Xildhibaan Cabdifataax Xuseen Xasan (Alloore), oo kamid ah golaha cusub ee deegaanka ee degmada Galkacyo oo caawa waraysi siinayey Idaacadda Daljir ayaa waxa uu kahadlay xaaladda ammaanka ee Galkacyo.
Xildhibaanku wuxuu sheegay in ammaanka guud ee magaalada Galkacyo waxbadan laga qabtay mudooyinkii ugu dambeeyey wuxuuna ugu baaqay shacabka gobolka Mudug gaar ahaan Galkacyo inay ciidanka lashaqeeyaan.
DHEGEYSO-Warkii Fiidnimo ee Daljir iyo Maxamud Cabdi Ibraahim.